I-EU ivala ukungena mahhala kwe-visa ezweni lonke
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Newsletter » I-EU ivala ukungena mahhala kwe-visa ezweni lonke
Ivamise ukusetshenziswa izakhamuzi ezicebile zamazwe angenayo i-visa ukuze zeqe izidingo namasheke we-Schengen, okuhlanganisa nalawo aklanyelwe ukumisa ukushushumbiswa kwemali nokuxhasa ngezimali kwamaphekula.
Ngokokuqala ngqa, i iyuniyani yase-Europe inqume ukubeka izwe lonke esijezisweni esiyisibonelo sokuhweba ngamaphasipoti anikeza ilungelo lokungena mahhala ebhulokhini laseYurophu.
Isiqhingi esincane IRiphabhuliki yaseVanuatu, esebenzisa uhlelo "lokuba yisakhamuzi ngokushintshanisa utshalomali", isengcupheni yokuba inkomba yokuqala. Okulandelayo kulayini ezinye izifundazwe ezinikeza “amapasi egolide” ngemali eningi.
“Amanye amazwe akhangisa ngamabomu ubuzwe bawo njengendlela yokuthola imvume yokungena kuwo iyuniyani yase-Europe amazwe,” the EU kusho umbhalo.
"Imvamisa isetshenziswa izakhamizi ezicebile zamazwe angenawo ama-visa ukweqa izidingo namasheke e-Schengen, okuhlanganisa nalawo aklanyelwe ukumisa ukuxhashazwa kwemali kanye noxhaso lwamaphekula."
Ngisho nangaphakathi iyuniyani yase-Europe, kunamazwe angaqapheli kakhulu ekukhipheni amaphasipoti - i-EU okwamanje imangalela iMalta neCyprus, ifuna izimo eziqinile zokunikeza ubuzwe ngokushintshanisa ukutshalwa kwezimali.
Ngokuqondene namazwe angewona awe-EU, kulula ukuthi iBrussels iwacindezele ngokusongela ukukhansela umbuso we-visa-free.
Kuze kube manje, i iyuniyani yase-Europe akakaze asebenzise isilinganiso esidlulele - ukuqedwa kombuso we-visa-free. Manje sekunethuba lokuqala lokukhombisa intando engenakuphikiswa ye-European Union - futhi okuhlosiwe okokuqala kwakuyisizwe esincane sasesiqhingini. Vanuatu, ipasipoti yayo ivula imingcele yamazwe angu-130. Ukuze uthole idokhumenti enjalo kumuntu wangaphandle, kwanele "ukutshala" i-$ 130,000.
Eminyakeni yamuva, "abatshalizimali" abanjalo abangaphezu kuka-10,000 baye baba izakhamuzi Vanuatu. Ukudayiswa kwamapasi, ngokusho kwe-Investment Migration Insider, kuletha cishe ingxenye yayo yonke imali engenayo ezweni elimpofu eliyisiqhingi. Cishe amaphesenti angu-40 “amapasi egolide” aseVanuatu athengwa amaShayina.
I-EU ikhathazekile ngokuthi phakathi “kweVanuatis” esanda kwenziwa kukhona abantu abasohlwini lwabafunwa umhlaba wonke lwe-Interpol, kanye nabalingiswa abangabazayo abavela eSyria, Yemen, Iran nase-Afghanistan.
"Siyabuhlonipha ubukhosi bamazwe esithathu ezindabeni zokuba yisakhamuzi, kodwa ngeke sivumele ilungelo lokungena ngaphandle kwe-visa e-EU lisetshenziswe njengesihenqo sokutshala izimali ukuze uthole ipasipoti," kusho i-European Commission mayelana ne-EU. umqondo wokuhlubula Vanuatu izakhamuzi zokungena mahhala kwe-visa.
Uma amazwe angamalungu e-EU evumelana nesiphakamiso se-European Commission, khona-ke ngemva kwezinyanga ezimbili zoshintsho, wonke umuntu othole ipasipoti yaseVanuatu ngemva kuka-2015 uzolahlekelwa ilungelo lokungena mahhala kwe-visa e-European Union. Ukuvinjelwa kuzosuswa uma uhulumeni echibiyela imithetho, kusho i-European Commission.
I-European Commission iphinde yathi okwamanje iqapha izinhlelo ezifanayo noma izinhlelo zamaphasiphothi egolide kwamanye amazwe amaningana, kuhlanganise nezifunda zaseCaribbean naseMpumalanga Yurophu njenge-Albania, Moldova neMontenegro.
Ngokwemininingwane yakamuva, imakethe yomhlaba wonke “yamapasi egolide” ilinganiselwa ukuthi ibiza amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-25 ngonyaka.
EYurophu, ipasipoti ibiza kusukela ku-$ 500 ayizinkulungwane (futhi kukhona "i-red tape" eminingi ye-bureaucratic), kodwa eziqhingini zaseCaribbean nasePacific Ocean, idokhumenti yokuba yisakhamuzi ingabiza kancane kakhulu ($ 100- $ 150 ayizinkulungwane) futhi ngaphandle kokubambezeleka okungadingekile.
Brussels I-Caribbean I-European Commission iyuniyani yase-Europe Investment Iran Malta Vanuatu
Inketho ephezulu yase-Australia yamaBrits afuna ukuthuthela kwelinye izwe
I-Uganda iphetha igunya lokuhlola i-PCR labo bonke abagonyiwe...
Ithimba Le-Bahamas Lihlangana Nezikhulu Eziphezulu Zezokuvakasha e...
Ucwaningo Olusha Lokwelashwa Okungeyona I-Opioid Ye-Post-Operative...
Imiphumela Emihle Ekutholweni Kwangaphambi Komdlavuza Wesibindi
'Izinhlangano eziyingozi' Facebook kanye...
Izingane eziyizigidi eziyishumi ezibhekene nesomiso esibi e-Afrika
Iziguli ze-Lebrikizumab Zizuza Ukukhishwa Kwesikhumba...
I-Martinique Tourism isebenzisa izinhlelo ezintsha ze ...
Isexwayiso Sezempilo Sikazwelonke: Izitayela Eziqhutshwa Ubhubhane...
UJohnny Depp - Icala lika-Amber Heard lokudicilela phansi isithunzi...
I-Jamaica Yemukela Izindiza Ezintsha Zezindiza Ezingastop Frontier...
I-Incredible India Yamukela Umcimbi Wokuqala We-Global Cruise
Imakethe Yezinkukhu Eziphilayo Ezintsha - Isimo Sakamuva Sise...
Izindiza ze-Taos Air Nonstop Roundtrip ezivela eCalifornia kanye...
Kwethulwe Uhlelo Olusha Lokuvimbela Umdlavuza
I-Occitanie Yakhiwe: Iwayini Elinamandla elinentshisekelo...